Cristiano Ronaldo oo liis ka kooban seddax ciyaaryahan u gudbiyey madaxweyne Florentino Perez | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiano Ronaldo oo liis ka kooban seddax ciyaaryahan u gudbiyey madaxweyne Florentino Perez
Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu si cad ugu sheegay maamulka kooxda Real Madrid inuu aaminsan yahay inay kooxdu u baahan tahay ciyaartooy cusub oo lagu xoojiyo si xilli ciyaareedkeeda loo badbaadiyo.
Los Blancos ayaa 8 dhibcood ka dambeysa hogaamiyeyaasha horyaalka La Liga ee Barcelona, tababare Zinedine Zidane ayaana kooxdiisu qaab ciyaareed xun ku bilaabatay xilli ciyaareedkaan.
Ronaldo ayaa laba gool dhaliyey sagaal gool oo horyaalka La Liga ah xilli ciyaareedkaan, halka sideed gool uu dhaliyey shan kulan oo tartanka UEFA Champions League ah.
CR7 ayaana ku wargeliyey maamulka Los Blancos inay go’aan xun gaareen markii ay kooxda ka direen Pepe, Alvaro Morata iyo James Rodriguez xagaagii lasoo dhaafay. Shabakadda Diaro Gol ayaana haatan sheegeysa inuu 32 sanno jirkaani ku wargeliyey madaxweyne Florentino Perez in loo baahan yahay in kooxda la xoojiyo.
Ronaldo ayaa xitaa gudbiyey liiska ciyaartoyda badbaadin kara Los Blancos, balse uma badna inay diyaar ku noqdaan suuqa kala iibsiga bisha Jannaayo – waxaana liiskaan ugu horreeya daafaca dhallinyarada ah ee dalka Portugal Goncalo Guedes kaasoo kooxdiisa Valencia ka caawiyey in aysan la kulmin wax guuldarro ah horyaalka La Liga xilli ciyaareedkaan.
Daafaca kale ee uu Ronaldo dalbaday in la keeno Real Madrid waa xiddiga reer Brazil ee u ciyaara PSG Marquinhos iyo weliba goolhaye cusub oo dooqa koowaad ah, wuxuuna dalbaday goolhayaha Athletic Bilbao Kepa.
Real Madrid ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa daafaca kooxda Chelsea David Luiz oo ay isku dhacsan yihiin tababarihiisa Antonio Conte.